मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको सीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म
निको भएका २३५१६३८
अपडेटः बिहीबार, जेठ १५, २०७७ । १४:२० बजे । स्रोत : coronavirus.jhu.edu / स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
नेपाल लाइभ आइतबार, चैत ९, २०७६, १९:३१
काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङमार्फत् हुने भुक्तानीको सीमा बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले आइतबारदेखि दैनिक तथा मासिक रुपमा हुने यस्तो कारोबारको सीमा बढाएको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार मोबाइल बैंकिङ क्युआर कोडमार्फत् हुने भुक्तानीको सीमा प्रतिदिन एक लाख रुपैयाँ र मासिक १० लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी गर्न मिल्नेछ।
त्यस्तै इन्टरनेट बैंकङ मर्चेन्ट बैंकिङतर्फ दैनिक १० लाख र मासिक ३० लाख रुपैयाँको भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। त्यस्तै इन्टरनेट बैंकिङ अकाउन्ट ट्रान्सफरतर्फ दैनिक १० लाख रुपैयाँ र मासिक ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न सकिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले वालेट र फण्ड ट्रान्सफरको सीमा पनि बढाएको छ। बैंकर एसोसिएसनले शुक्रबार सम्पूर्ण विद्युतीय कारोबारको सेवा निःशुल्क गरेको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमणको उच्च जोखिमको सावधानीका लागि भन्दै बैंकहरुले बैंकमा मानिसहरुको भीड कम गर्न ग्राहकहरुलाई यस्तो अफर गरेका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार नै सूचना जारी गरि बैंकिङ सेवा सुविधा बन्द नहुने निर्णय गरिसकेको छ। बैंकहरुमा हुने भीड कम गर्न राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकिङको सीमा बढाएको हो। यसभन्दा अगाडि बैंकहरुको सफ्टवेयर ह्याक हुने क्रम बढेको थियो। त्यससँगै बैंकहरुले विद्युतीय भुक्तानीको सीमा घटाएका थिए।
कृषिमा ६९ अर्ब ३६ करोड बजेट : अर्गानिक उत्पादन र सिँचाईमा जोड
बासमती चामलको आयातमा कर लाग्यो, विद्युतीय सिगरेटमा पनि ३० प्रतिशत अन्त:शुल्क
महगिँदै स्मार्ट वाच, लगाइयो १५ प्रतिशत अन्तशुल्क
बजेटमा वित्तीय क्षेत्र : एक खर्बको पुनर्कर्जा मार्फत राहत प्याकेज सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरसले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने भन्दै एक खर्बको पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ।... बिहीबार, जेठ १५, २०७७
बीमाको दाबीलाई सहज बनाइने, लकडाउनका कारण प्रभावितको बीमा प्रिमियम तिर्ने समय थपिने आम नागरिकमा बीमाको पहुँच विस्तार गरिने भएको छ। बीमाको दाबी व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाइने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा उल्ले... बिहीबार, जेठ १५, २०७७
बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहन गर्ने आगामी आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय... बिहीबार, जेठ १५, २०७७
कृषिमा ६९ अर्ब ३६ करोड बजेट : अर्गानिक उत्पादन र सिँचाईमा जोड शुक्रबार, जेठ १६, २०७७
महँगिदै डिजेल र पेट्रोल, बढ्यो सुनको भन्सार बिहीबार, जेठ १५, २०७७
बासमती चामलको आयातमा कर लाग्यो, विद्युतीय सिगरेटमा पनि ३० प्रतिशत अन्त:शुल्क बिहीबार, जेठ १५, २०७७
महगिँदै स्मार्ट वाच, लगाइयो १५ प्रतिशत अन्तशुल्क बिहीबार, जेठ १५, २०७७
युवराज खतिवडाको तेस्रो बजेट : यथार्थपरक बनाउने प्रयास बिहीबार, जेठ १५, २०७७
१२ बजेपछि मन्त्रालयबाट निस्किए अर्थमन्त्री, सचिवहरु रातभर मन्त्रालयमै बिहीबार, जेठ १५, २०७७
महँगिदै डिजेल र पेट्रोल, बढ्यो सुनको भन्सार नेपाल लाइभ
बासमती चामलको आयातमा कर लाग्यो, विद्युतीय सिगरेटमा पनि ३० प्रतिशत अन्त:शुल्क नेपाल लाइभ
महगिँदै स्मार्ट वाच, लगाइयो १५ प्रतिशत अन्तशुल्क नेपाल लाइभ
युवराज खतिवडाको तेस्रो बजेट : यथार्थपरक बनाउने प्रयास सविन मिश्र